Aluminium sallaan, Aluminium Truck Box, Aluminium sariirta - YSXF
Racking Aluminium Beeraha
Aluminium koraya Mushrooms
Xulashada Mushrooms Qalabka Aluminium ee Aluminium
Moodooyinka Aluminium ee Daawaha Isugeynta
Aluminium Daawaha Qalabka Aeronautical
Tarooli Aluminium Daawaha
Astaanta Daawaha Aluminium
Sariirta Daawaha Aluminium
Aluminium Aluminium Qalabka loogu talagalay Noocyada kala duwan ee Baabuurta
Daaha Daawaha Aluminium
Warshadaha Dhismaha Mashiinka Aluminium
Jaranjarada Daawaha Aluminium
Waxsoosaarka Aluminium ee Warshadaha Cuntada ee Barafoobay
WAANU SOO BANDHIGAYNAA BARNAAMIJYADA SARE
SOO SAARKA BARNAAMIJYADA
Sanduuqayaga MaxxHaul Trailer Tongue waxaa loogu talagalay in lagu dhejiyo gawaarida leh qaab-dhismeedka A-Tongue si loo siiyo kaydinta dheeraadka ah ee qalabkaaga, qalabka geesaha, silsiladaha badbaadada, xarkaha, daboolida baabuurta, qalabka banaanka, fiilooyinka, qalabka dhejiska, fiilooyinka, gawaarida gawaarida iyo waxyaabo kale oo badan . Weligaa ha iloobin qalab ama qalab marka aad u baahatid! - Waxaa laga sameeyaa walxaha aluminium ee fudud iyo cufnaanta u adkaysta wax-u-adkeysiga leh aluminium leh dhisme tolmeed oo dhammaystiran oo dhammaystiran iyo dhammaystirka jaakad adag oo budo ah - Qaabka saxanka dheeman ayaa bixiya stren lagu daray ...
NOOCA DARYEELKA SAHAN EE DARYEELKA IYO QAADASHADA - Sanduuqa qalabkan waxaa loogu talagalay dhisme adag laakiin miisaan fudud si loogu dhejiyo dhinaca hore ee A-Frame style trailer. Si fudud loo soo ururiyo, ku habboon in laga qaado hal meel ilaa meel kale haddii loo baahdo. Xalka ugu fiican ee keydinta qalabkaaga ama alaabada garaashkaaga oo ku dar meelo badan oo keyd ah oo lagu dhejiyo trailer-kaaga. ES NOOCA LA SAMAYN KARO DIAMOND RUGGED Design - Waxaa laga dhisay aluminium qafiif ah oo leh tolmo diiran oo buuxa, si loogu isticmaalo qallafsan. Sanduuqa aaladda wax lagu keydiyo ayaa ilaalin doona ...
Hordhac Waxsoosaar Shiinuhu waa dhoofiyaha ugu weyn aduunka ee waxsoosaarka biyaha.Waa meesha lagu farsameeyo laguna keydiyo alaabada biyaha. Suuqa ugu weyn ee hada la isticmaalo, inta badan qalabka la qaboojiyey ee la isticmaalay waa caag, bir bir ah, sabuurad galvanized iyo wixii la mid ah. Waxay leeyihiin kuleyl xumo xagga tamarta ah, isticmaalka tamarta oo sareyso, wax fudud oo la dhaawici karo, iyo habsami u socodka howlaha. Shayga waxaa laga sameeyay aluminium tayo sare leh. Waxay leedahay faa'iidooyinka nolosha muddada dheer, wareejinta kuleylka wanaagsan iyo quic ...
Qeexida alaabada miisaanka la qaadan karo ee aluminiumka laalaabka sallaan midabka qalinka, Madow ama sida loo codsaday Qiyaasta nooca la habeeyay ee loo habeeyay daaweynta dusha sare ee muuqaalka Non / Oxidation Muuqaalka Awoodda sare, caabbinta daxalka, Waxyaabaha miisaanka fudud ee alaabada ah
Qalabka aluminium ee loo yaqaan 'Aluminium aluminium' ayaa badanaa loo isticmaalaa dhinaca ilaalinta gawaarida waaweyn, isjiidka, iyo gawaarida injineernimada, kuwaas oo ciyaara doorka ilaalinta, fuulista, iyo quruxda; aluminium aluminium alwaax wuxuu leeyahay miisaan fudud, xasillooni wanaagsan, caabbinta qiiqa sare, iska caabin miridhku, qurux, iyo culays saarid Iyo adkeysiguna sidoo kale wuu buuxin karaa shuruudaha caadiga ah; qaabka iyo cabirka sidoo kale waa loo habeyn karaa iyadoo loo eegayo baahida macaamiisha. Soo Bandhigida Alaabada
Hordhac Waxsoosaar Mashruuc-hawleed sare-sare ah oo ay naqshadeysay oo ay soo saartay shirkadeena.Waa farsamada farsamaynta waxaa lagu sameeyaa iyadoo la hagaajinayo wax-soo-saarka gudaha.Waxay ka samaysan tahay aluminium-ka aluminium-ka iyo qaab-dhismeedka qalliinka. Waxay ku leedahay qalab hoose oo miisaamaya, kaas oo si otomaatig ah u cabsi galin doona marka culeysku ka bato miisaanka aaminka ah, hagaajinta amniga sheyga. Sharaxaadda Alaabada Xamuulka Qaadista Qalabka Aluminium Aluminium Midab Lacag, Madow ama sida la codsaday ...
Hordhac Waxsoosaar Badeecadani waa shirkaddayda cilmi baaris madaxbannaan iyo horumarinta kooxda gudaha & badeecadaha waxtarka leh, mid ka mid ah adeegsiga ballaaran ee kooxda xugong, iyo shirkadaha kale, ayaa ku guuleystay sumcadda ballaaran ee suuqa. alaabada gawaarida, waxay yareyneysaa rakibida dhibaatooyinka qalafsan. Noocyada Wax Soo Saarka 1. Adeegsiga gudaha noocyo kala duwan oo qaab dhismeedka xoojinta ah, marka la barbar dhigo waxyaabaha kale, si hufan uga fogow dhibaatada deformat ...
Hordhaca Badeecadaha Pallets waxaa inta badan loo isticmaalaa wareejinta bakhaarka iyo saadka. Ilaalinta deegaanka, badbaadada cuntada iyo arrimaha kale ayaa si isa soo taraysa caan u noqday. Sariirta Aluminium-liiyooy, oo beddel u ah alwaaxdii alwaaxda, baaldiyeyaasha caagga ah iyo boodhadhka birta ah, Waxaa si ballaadhan looga isticmaalay waddamada horumaray sida Yurub iyo Ameerika. Sifeynta Badeecada Midab Lacag, Madow ama sida la codsaday Miisaanka 18-25kg / Cabbirka La habeeyay 1200 * 800 * 152/1200 * 1000 * 152/1219 * 1016 * 15 ...
Xuzhou Caixin Aluminium Products Co., Ltd. waa soo saare waxsoosaarka aluminium oo leh qalab tijaabo ah oo qalabaysan iyo xoog farsamo oo xoog leh. Iyada oo leh tiro ballaaran, tayo wanaagsan, qiimo macquul ah iyo naqshadeynno casri ah, alaabteenna waxaa si ballaaran loogu isticmaalaa dabaysha korontada dhalisa qalab, mashiinno culus iyo gawaari, qalabka cadceedda iyo warshado kale. Wax soo saarkayagu si ballaaran ayaa loo aqoonsan yahay oo ay ku kalsoon yihiin dadka isticmaala waxayna la kulmi karaan si isdaba-joog ah oo isbeddelaya baahiyaha dhaqaalaha iyo bulshada.Waxaan soo dhaweyneynaa macaamiisha cusub iyo kuwa duugga ah ee ka socda dhammaan qaybaha nolosha si ay noola soo xiriiraan xiriirka ganacsi ee mustaqbalka iyo guusha wadaagga ah!
Nidaamyadee ayaa alaabooyinka aluminium ay soo mareen alaabta ceyriinka ah illaa wax soo saar iyo wax u sameynta?
Daaritaanka saxda ah ee Aluminium ayaa laga samayn karaa alaabada aluminium. In kasta oo miisaanka iyo qaababku kala duwan yihiin, cabirka saxda ah, muuqaalka fiican iyo waxqabadka deggan ayaa ka faa'iideysan kara dadka iyo dadka, waxayna dhisi karaan midab ka duwan nolosha. Nolosheena, marwalba waxaa jira shirkadda alum ...
Qalabka Aluminium ee aluminiumku waa mid ka mid ah wax soo saarka alaabada sanduuqa aluminium. Waa nooc ka mid ah sanduuqa ay sameysmayaan walxaha aluminium ee aluminiumka ah si loo gaaro codsashada qalabka meelaynta iyo qalabka cabbiraadda. Ka duwan yahay sanduuqyada kale, aaladda waxay leedahay aluminium. Cha ...
Astaamaha iyo adeegsiga astaamaha aluminium ee warshadaha
Astaamaha 1. Waxaa jira qeexitaanno iyo cabbiro kala duwan, cabbirka dhinaca dheer iyo kan gaabana waa isku dhufasho. Tusaale ahaan, 4040, 4080, 40120, 4040-ka guud ee caadiga ah waa afargeesle, afarta dhinacba waa 40mm, 4080-na waa dhinaca dheer 80mm. Dhinaca gaaban waa 40mm, oo waa ...
No. 1, Lutai Industry Park, Fangcun Town, Degmada Tongshan, Xuzhou, Jiangsu, Shiinaha